Tendrombohitra Hourglass - Tattoo Ideas Art
sonitattoo Janoary 17, 2017
1. Ny tontolon'ny Hourglass ao amin'ny tratrany dia mampiavaka ny olona
Tia tato ho ato ny tontolon'ny olona ao amin'ny tratrany ambony misy loko manga manjelanjelatra manjelanjelatra eo amin'ny soroka mba hahatonga azy ireo ho tsara tarehy sy foxy.
2. Ny tontolon'ny Hourglass eo amin'ny sandriny havanana dia mampiseho lehilahy iray foxy
Tian'ny olona ny manao tato amin'ny Hourglass amin'ny sandriny havanana. Ity endrika Tattoo ity dia mahatonga azy ireo hanana endrika maneho azy.
3. Ny tontolon'ny Hourglass amin'ny endrika manga sy mavo dia mahatonga ny olona ho tsara tarehy
Ireo lehilahy mavokely dia matetika mandeha amin'ny tontolon'ny Hourglass miaraka amin'ny loko manga sy mavo amin'ny bicep; Izany sary tatoazy izany dia mahatonga azy ireo hijery tsara sy mahafinaritra
4. Ny tontolon'ny Hourglass eo amin'ny sandriny ambany dia mahatonga ny olona hibanjina
Ny lehilahy mavomavo dia tia tatoazy amin'ny andro ambany ambany; Izany sary tatoazy izany dia mahatonga azy ireo ho tsara tarehy sy mahafatifaty
5. Ny tontolon'ny Hourglass misy loko manga vita amin'ny manga dia mahatonga ny ankizivavy ho tsara tarehy
Ny ankizivavy mametraka blouses tia ny Tendroka Hourglass miaraka amin'ny loko manga vita amin'ny raozy matevina any aoriana. Izany dia manome azy ireo fijery mahafinaritra
6. Ny tontolon'ny Hourglass ao amin'ny sandry kely ambany miaraka amin'ny loko mavomavo dia mamorona ny foxy
Tia tato ho ato ny tontolon'ny menamena eo amin'ny sandry kely ambany miaraka amin'ny loko manga; Izany sary tatoazy izany dia mampiseho azy ireo ho mendrika sy mahafinaritra
7. Ny tontolon'ny Hourglass eo amin'ny sandriny havanana ambony, mahatonga ny lehilahy ho sariaka kokoa
Ny lehilahy dia hanao tato amin'ny Hourglass eo amin'ny sandriny ankavanana miaraka amin'ny rojom-bidy mba hisarihana ny sain'ny olona
8. Teto an-tampon-tavoahangy eny an-tanana dia mampiavaka ny vehivavy ny vehivavy
Tia tia tapa-tavoahangy misy tavy manga amin'ny manga ambony ny vehivavy. Izany dia manome ny endriny manaitra
9. Ny tontolon'ny Hourglass eny an-tsoroka dia mampiaraka ny tovovavy iray
Tovovavy mavomavo dia ho tia tato amin'ny Hourglass amin'ny sorokany miaraka amin'ny voninkazo mainty; Ity tattoo mahatalanjona ity dia mahatonga azy ireo ho matanjaka sy tsara tarehy
10. Ny tontolon'ny Hourglass eny an-tsoroka dia mahatonga ny vehivavy hitazona fatratra
Vehivavy mitafy tendan-tory tsy misy fotony no tia tato amin'ny Hourglass miaraka amin'ny loko marevaka amin'ny tanana ambony; Ity tatoazy ity dia mifanitsy amin'ny loko mavo mba hahatonga azy ireo ho tsara tarehy sy mahafinaritra.
11. Ny tontolon'ny Hourglass amin'ny tanana ankizivavy dia manome azy ny fijery manintona
Ny ankizivavy manana hoditra maivamaingo dia handeha hamolavola ny tontolon'ny Hourglass amin'ny loko mainty eo an-tanany. Izany dia manome azy ireo ny endrika miavaka
12. Ny tontolon'ny Hourglass eo amin'ny sandriny ambany dia mahatonga ny olona hibanjina
Lehilahy marevaka tia tato-tavoahangy amin'ny sandriny ambany miaraka amin'ny loko mainty mainty; Izany sary tatoazy izany dia mahatonga azy ireo ho tsara tarehy sy mahafatifaty
13. Ny tontolon'ny sora-bavony eny an-tsoroka dia mahatonga ny vehivavy ho sariaka
Ny vehivavy dia tia ny tato amin'ny Hourglass amin'ny sorokany miaraka amin'ny voninkazo mavomavo; Izany sary tatoazy izany dia mahatonga azy ireo hibanjina
14. Ny tontolon'ny Hourglass eo amin'ny sandriny ambany dia mamorona ny foxy
Tia tato ho ato ny tontolon'ny lehilahy amin'ny sandriny ambany miaraka amin'ny loko manga; Izany sary tatoazy izany dia mampiseho azy ireo ho mendrika sy mahafinaritra
15. Ny tato amin'ny Hourglass amin'ny soroka dia manome ny ankizivavy ho babo
Ny zazavavy, manao akanjo marefo marefo dia handeha ho an'ny tontolon'ny Hourglass amin'ny sorok'izy ireo miaraka amin'ny endrika mavokely mavokely mahafinaritra mba hampisehoana ny fijeriny ho any amin'ny vahoaka
16. Totozy eny amin'ny saha amin'ny sandroka havanana, ataovy izay hahasarika ny lehilahy
Ny lehilahy dia hanao tato amin'ny Hourglass eo amin'ny tanany havanana mba hisarihana ny sain'ny olona
17. Ny tontolon'ny Hourglass eo an-tsorony dia mampiseho vehivavy mahafinaritra
Ny vehivavy dia tia ny tato amin'ny Hourglass eo an-tsoroky ny sorok'izy ireo miaraka amin'ny loko manga; Izany sary tatoazy izany dia mahatonga azy ireo hibanjina
18. Ny tontolon'ny Hourglass ho an'ny lehilahy dia mahatonga azy ireo hijery hazo
Lehilahy tia ny voninkazo volom-boasary, ny tontolon'ny Hourglass ao amin'ny bicep mba hahatonga azy ireo ho be herimpo
19. Ny tontolon'ny Hourglass eo amin'ny soroka dia mitondra endrika fijery feminista
Tovovavy toy ny tapa-tavoahangy tsara tarehy amin'ny totozy manga amin'ny soroka. Ity endrika tatoazy ity dia mahasarika.
20. Ny tontolon'ny Hourglass eo amin'ny feny dia manome ny ankizivavy ho tsara tarehy
Ny ankizivavy, indrindra fa mitafy tendan-kanina fohy sy fehiloha fohy dia handeha ho an'ny tontolon'ny Hourglass eo amin'ny feny ankavanana miaraka amin'ny loko volomparasy volomparasy mba hahatonga azy ireo ho tsara kokoa ho an'ny lehilahy.
21. Ny tontolon'ny Hourglass ho an'ny lehilahy manana endrika mavokely mena sy mainty dia mahatonga ny olona ho mendri-ponenana
Ireo lehilahy te-hijery tsara dia ho tia tato amin'ny Hourglass miaraka amin'ny loko mavokely sy mainty eo amin'ny bicep
22. Ny loko volomparasy amin'ny tatoazy Hourglass ao an-damosin'ny vehivavy dia mampiavaka azy ireo
Vehivavy manana hoditra malefaka dia handeha amin'ny loko volomparasy, tapa-tavoahangy Hourglass ao amin'ny tendany, mba hahatonga azy ireo ho tsara tarehy sy mahafatifaty
23. Ny tontolon'ny Hourglass amin'ny feny dia mampiseho ny fijerin'ny vehivavy.
Tovovavy toy ny tavoahangy tsara tarehin'i Hourglass eo amin'ny feny miaraka amina fo iray. Ity endrika tatoazy ity dia manintona ary manatsara ny kalitaon'ny vehivavy.
24. Ny tato amin'ny Hourglass amin'ny soroka dia manome ny ankizivavy ho babo
Ny ankizivavy, manao akanjo marefo marefo dia handeha ho an'ny tontolon'ny Hourglass eo an-tsorony mba hamoaka ny fijeriny ho any amin'ny vahoaka
tatoazy voninkazokoi fish tattootatoazy lolotattoo eyeNy zodiaka dia mampiseho tatoazyeagle tattoostattoo infinitytattoos mahafatifatymozika tatoazyhenna tattootattoos voronatattoos foottattoo watercolorTattoo Feathertattoo ideasAnkle Tattoostattoostattoos sleevetattoo octopustattoos mpivadycompass tattootattoos crossanjely tattoosmoon tattoosraozy tatoazytattoos rahavavydiamondra tattootattoos backtratra tatoazylion tattoostato ho an'ny vatofantsikarip tattoosHeart Tattoosmehndi designtattoo cherry blossomnamana tattoos tsara indrindratattoosmasoandro tatoazytanana tatoazytattoos armtattoos ho an'ny lehilahycat tattoosTatoazy ara-jeometrikaelefanta tatoazyscorpion tattooarrow tattooloto voninkazotatoazy ho an'ny zazavavytatoazy fokofitiavana tatoazy